ဓမ္မဂင်္ဂါ: အမေ့ရွာလေးမှာ ပန်းပြန်ဖြစ်မယ့် မြစ်
အမေ့ရွာလေးမှာ ပန်းပြန်ဖြစ်မယ့် မြစ်
အမေက လှေလေးတောင် မခတ်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့
(အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ပါတယ်။တစ်လတာလောက် ဓမ္မဂင်္ဂါရေးစီးက ရပ်နေပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကူးပေါ်ရာ ၀ါကျတွေကို ဆွဲဆန့်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ တစ်လတာ ကာလတိုလေးက လွမ်းစရာပါ။ ရေးစရာတော့ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ရေးလက်စ “ သီတဂူလမ်း” ကိုလည်း ပြီးအောင် လျှောက်ရဦးမယ်။ အမေ့အိမ်က ပြန်လာတဲ့အခါ တွေ့ကြသေးတာပေါ့။ အားလုံးပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းပါစေ။)
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 10:14 AM
ဦးဇင်း.. အိမ်အပြန်လမ်း ၀မ်းမြောက်ပီတိ ငြိပါစေ..ဘုရားး
မော်ဒန်ဆိုတဲ့ကောင်ကို နမ်းလက်စနဲ့ ငါ ဆက်နမ်းတော့
ပန်တျာကြည်လင်ရဲ့ မြစိမ်းရှင်က ငါ့နှာခေါင်းထဲ အရှင်လတ်လတ်ကြီး . . .
ရှင်သာရိပုတ္တရာ လား၊ ဘာလား ကြည်ညိုမိမယ်လုပ်တုန်း။
ဗြုန်းဆို ငါ့ကိုယ်ငါ လက်တို့မေးလိုက်တယ်
“အယ် . . . မော်ဒန်ဆိုတဲ့ကောင်က
သူ့ရွာသူ ပြန်ပြီး သေမှာတဲ့လား”။